Vem, umgca wokuyalela umhleli wokubhaliweyo ophefumlelwe nguVim | Ubunlog
Vem, umhleli wombhalo ophefumlelweyo we-Vim
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiVem. Oku yi Umhleli wombhalo wokuvula simahla kunye nomthombo ovulekileyo. Kubandakanya ubeko lomyalelo wokubonelela ngenkxaso epheleleyo yekhibhodi ngaphezulu komhleli wombhalo weVim kunye nokwenza ukuba ibe yinto enomdla ngangokunokwenzeka.
Ngokubanzi yiseti yeefayile zoqwalaselo. Olu tshintsho kwindlela esebenza ngayo iVim ngokunciphisa kunye nokwenza lula iseti yomyalelo, ezinxulunyaniswa namaqhosha okhiye okhethekileyo. Le miyalelo yabelwe ngebhodi yezitshixo, ukwandisa isikhundla sabo ngokwamaxesha abo.
IVem izisa abasebenzisi ngeendlela ezimbini eziphambili: ukuyalela kwaye ufake. NjengakwiVim, isitshixo ngasinye kwiVem senza isenzo xa sise- imo yokuyalela kwaye ufake umbhalo xa ungene faka imowudi. Singangena kwifayile ye- imo yokuyalela ngokucofa Ctrl + O kunye faka imowudi ngokucinezela i i isitshixo. Ukuphuma nganye yezi ndlela, kuya kufuneka ucofe isitshixo kuphela Esc.
Njengabasebenzisi abaninzi bayazi, iVim yinguqu ephuculweyo ye-vi, ngenkxaso yokuqaqambisa i-syntax, ukuhlengahlengisa izinto ezininzi, kunye nokugqibezela ngokuzenzekelayo, kodwa isenendawo egobileyo yokufunda. Injongo yeVem kukwandisa amava omsebenzisi, ukususa igrama yomyalelo enokubothusa abasebenzisi abanokubakho.
IVem yabela imiyalelo yayo kusasazo lwe QWERTY ikhibhodi ngokuzenzekela. Singalutshintsha oluqwalaselo lube yi- QERTZ o UMXHOLO kweyakhe ifayile yoqwalaselo. Abasebenzisi banokufumana uluhlu olupheleleyo lwezinto ezisisiseko kunye neziphambili zokwenza ubeko lwebhodi yezitshixo kwiwebhusayithi yeprojekthi.
Kule skrini ingentla ungabona ifayile ye- imiyalelo eya kuthi abasebenzisi bayazi ukuba bakwazi ukwenza ushicilelo oluncinci kwifayile, kodwa kunjalo, zininzi ngakumbi. Oku kunokuboniswa kwisifundo ukuze ufunde okungakumbi malunga iikhonsepthi ezisisiseko nguVem.
1 Iimpawu ngokubanzi zeVem
2 Faka iVem kwi-Ubuntu 20.04
Iimpawu ngokubanzi zeVem
Yiyo Inkqubo yasimahla nevulekileyo.
Kuba iVem sisimo nje esingaphezulu kweVim, siya kuba nakho ukonwabele uninzi lweempawu ezibonelelwa yiVim.
Ikhowudi yayo yomthombo inokufumaneka kwi GitHub phantsi kwelayisensi ye-MIT.
Vem kunjalo ngokukhawuleza kunye nokukhanya.
Singasebenzisa umhleli ofanayo kwalapha ekhaya nakwiSSH.
Es iqwalaselwe kakhulu. Siza kuba namakhulu okhetho lokumisela.
Siya kuba nazo inani elikhulu lezongezo iyafumaneka ukufumana inqaku elifanelekileyo lokusetyenziswa esifuna ukukunika lona.
Inezimbini iindlela eziphambili: ukuyalela kwaye ufake.
IPodemos vula iiwindows ezininzi.
Akhawunti ukuqaqanjiswa kwes syntax.
Iyavuma iiplagi kunye nemixholo yombala.
Ikwanayo Inkxaso yeRegex.
Abasebenzisi banokudibana ne uxwebhu olupheleleyo kunye nezifundo ezikwi-Intanethi ukusenza siyisebenzise.
Ezi zezinye zeempawu zale nkqubo. Banga uzazi zonke ngokweenkcukacha ukusuka kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Faka iVem kwi-Ubuntu 20.04
Ukufaka iVem ku-Ubuntu kuya kufuneka sibe nesixhobo yiya ifakiwe. Ngaye siya kuthi clone umthombo ovela eGitHub ukusuka kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
git clone https://github.com/pacha/vem.git
Nje ukuba ukuhlanganiswa kwezinto kugqityiwe, siya kuthi ngena kulawulo olusandula ukwenziwa kwaye usebenze wenze ukufaka:
Emva kofakelo, ukuya baleka iVem Kuya kufuneka sisebenzise kuphela kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) umyalelo onje ngale ilandelayo:
Ukuqala ngeVem, sinako qala ngokujonga i Isikhokelo somsebenzisi, apho zonke iinkalo zayo zichaziwe. Ngelixa iVem inxibelelana nemisebenzi emininzi yeVim, isasebenza ngokulula kwaye sinokuwafunda la maphepha okanye siwasebenzise ukubhekisa phambili.
Nje ukuba sifakelwe, siya kufumana umhleli owahlukileyo, ojolise kakhulu kumava omsebenzisi, azama ukuba ngokulula ngokulula kwangaxeshanye anike umsebenzisi ulawulo olupheleleyo esebenzisa ikhibhodi kuphela. I-Vem ayenzelwanga ngokukodwa ukukhuphisana neVim, kodwa ukuyenza ifikeleleke kubasebenzisi abaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Vem, umhleli wombhalo ophefumlelweyo we-Vim
IFirefox 81 iza nenkxaso kulawulo lwe-multimedia ebonakalayo, ukukhawulezisa izixhobo kwiLinux kunye nezinye izinto ezintsha
Ubuntu Touch isungula i-OTA-13 yayo kwaye kwezinye iindlela yi-25% ngokukhawuleza